मार्च 2, 2019 मार्च 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments ग्राहक, नेपाल टेलिकम
मोबाइलको ब्यालेन्स थाहा पाउँन *400# डायल गर्नुहोस ।
आफ्नो मोबाइल नम्बर थाहा पाउँन *9# डायल गर्नुहोस ।
कल फरवार्ड गर्न *2198xxxxxxxx फरवार्ड गर्न चाहेको नम्बर# डायल गर्नुहोस ।
कल वैटिंग सेवा सुचारु गर्न 43# डायल गर्नुहोस क्यान्सिल गर्न #43# डायल गर्नुहोस । मोबाइलमा FNF सेवा सुरु गर्न पहिलो पटक FNFSUB98XXXXXXXX लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस ।
अन्य ४ वटा नम्बर थप गर्न FNFADD98XXXXXXXX लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस । प्रिपेड मोबाइलबाट अर्को नम्बरमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न422SECURITY CODE98xxxxxxxx.RS# डायल गर्नुहोस ।  आफ्नो पोस्टपेड मोबाइल तथा ल्याण्डलाइन टेलिफोनको मासिक बिल, बाँकी रकम, अग्रिम रकम आदि हेर्न www. http://gsmbl.ntc.net.np/ मा login गर्नुहोस ल्यान्डलाइनको लागि AC Number (मासिक महशुल तिरेको बिलमा लेखेको हुन्छ ) र मोबाइलको लागि PUK नम्बर राखेर हेर्न सकिन्छ ।  आफ्नो मोबाइल नम्बरको सेकुरिटी कोड प्राप्त गर्न SCODE लेखेर पुक कोड प्राप्त गर्न PUK लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस ।  पोस्टपेड मोबाइलमा ISD सुबिधा थप्न #3310000#डायल गर्नुहोस सुबिधा हटाउन 3310000# डायल गर्नुहोस ।
मोबाइलमा CRBT राख्न *1455# डायल गर्नुहोस र प्राप्त निर्देशन अनुसार गर्नुहोस ।
अथवा crbt कोड छ भने SUB स्पेस crbt code लेखेर 1455 मा म्यासेज गर्नुहोस ।
मोबाइलमा CRBT हटाउन UNSUBलेखेर 1455 मा म्यासेज गर्नुहोस अथवा
*1455#डायल गर्ने * लेखेर पठाउने,अनि 8 लेखेर पठाउने अनि अन्तमा सुनिस्चित गर्न 1 लेखेर पठाउनुस।
मिस्डकल नोटिफिकेसन (अलर्ट) सेवा सुचारु गर्न 1400# डायल गर्नुहोस या sub mca लेखेर १४०० मा sms गर्नुहोस ,सेवा बन्द गर्न unsub mca लेखेर sms गर्नुहोस । ल्याण्डलाइन टेलिफोनको तिर्नुपर्ने बिल रकम थाहपाउँन CB065XXXXXX (पुरा टे.न.) लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस । Due amount भनेको तिर्नुपर्ने रकम हो available credit भनेको फोन गर्न मिल्ने बाँकी रकम हो।
ADSLको अन्तिम मिति थाहा पाउन VLNTADSL065XXXXXX(पुरा टे.न.) लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस । ADSLको ब्यालेन्स थाहा पाउन BLNTADSL065XXXXXX (पुरा टे.न.) लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस ।
नेपाल टेलिकमको बिबिध सेवा बारे जानकारी लिन तथा ब्यालेन्स तथा बाँकि डाटा जानकारी लिन NEPAL TELECOM (नेपाल टेलिकमको अफिसियल एप्लिकेसन्) मोबाइलमा डाउनलोड र रजिस्टर गर्नुहोस ।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार
← आयुर्वेदिक वृक्ष अशोक र यसका फाइदाहरु
स्वाइन फ्लू (Swine Flu) र यसको उपचार →
डिसेम्बर 29, 2016 डिसेम्बर 29, 2016 साइन्स इन्फोटेक 0